Golaha Wasiirada Albaabada Birta Soo-saareyaasha & Shirkadayaasha - Shirkada Shiinaha Albaabka Albaabka Birta Furaha
Ball siddo Slides
Xayeysiisyada Khaanadaha Hoos yimaada
Bogagga Dahaarka Budada
Albaabka Albaabka Albaabka
Dambiilo silig ah
Micro Gear saar
Bandhigyada Iyo Macaamiisha
Aqoon Isweydaarsi Shirkadeena
Alaabtayada waxaa lagu iibiyaa seddex magac oo caan ah: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Iyagu waa nidaam khaanad, bogagga qarsoon, isdabajooga Ball qaadashada, Miisaska Miisaska, Furaha qarsoon, gacmaha, Qalabka furka iyo qalabka kale ee qalabka guryaha, kuwaas oo loo isticmaalo qalabka guryaha, armaajooyinka, qalabka guryaha iwm.
Ahama square ahama ...
Foornada kariyaha gaaska dhegta keliya ...
Guntin-on gal golaha wasiirrada ...
86mm Dhererka dhalada dhaldhalaalka Dhererka ...
150mm jihada dhererka dhererka s ...
Albaabka Golaha Wasiirada Runti Jilicsan oo dhow Fariin qarsoon
Albaabka golaha wasiirada runti jilicsan oo qarka u qarsoon oo lagu xiro qalabka aluminium. Faradani waxay badanaa u isticmaashaa albaabka aluminium albaabka. Biraha runta ah ee la qariyey oo ku kala duwan faanta qalabka guryaha. Kama arki doontid jirka fallaaraha sabuuradda dhinaceeda. Ka dhig golaha wasiirada qalabka gurigaaga muuqaal wanaagsan. Haddii aad xiisaynayso qafiskayaga, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
H11 Nooca Mareykanka ee gacanta gaaban oo wajihiisu yaalliin 1/2 dusha
Hordhac:H11 nooca Mareykanka ah ee gacanta wajiga hore ee birta fallaadha 1/2 ee guud ahaan badanaa loo isticmaalo jikada jirkeeda & armaajooyinka musqusha Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: H11
US2D12 nooca Mareykanka ee 2D fing
Hordhac:US2D12 faseexada hagaajinta nooca 2D ee Mareykanka badiyaa waxay u isticmaashaa jikada jir jikada & armaajada musqusha Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US2D12
US2D12S 2D jilicsan dhow is haysta wajiga jir Frame 1/2 ″
Hordhac:US2D12S 2D Soft soft compact Face Frame Hinge 1/2 ″ badanaa waxaa loo isticmaalaa jikada wajiga jir & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US2D12S
Qarsoon Wejiga Farshaxanka 3/4 ″ ee loogu talagalay armaajooyinka nooca Mareykanka ah
Hordhac:Qalabka wajiga qarsoon ee 3/4 ″ ee loogu talagalay armaajooyinka nooca Mareykanka ah ayaa badanaa loo isticmaalaa jikada wajiga & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US2D34S
US2D114 nooca Mareykanka ee 2D fing
Hordhac:US2D114 Nooca Mareykanka ee 2D fingaraga hagaajinta badanaa waxaa loo isticmaalaa jikada wajiga jikada & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US2D114
3D hagaajinta waji fallaaraha 1 inji oo dul saaran jikada & qolka musqusha
Hordhac:3D Isku hagaajinta waji faneedka 1 inji oo dusha sare ah jikada & qolka musqusha, oo aan jilicsanayn, 1 lay dusha sare, bir la jeexjeexay, nikkel la mariyay. Iyada oo qaabka godka fur 45mm, ku marooji gacanta on codsiga. Dayactirka Kaamka iyo 4 tab oo si fudud loogu meeleeyo wejiga jirkiisa. Xirmada caadiga ah waa mid kasta oo aan lahayn boolal, xirxirnaan badan oo kartoonka ku jirta.
Qaab No.: US3D1
US3D1S nooca Mareykanka ee 3D hagaajinta faraqa caadiga ah
Hordhac:US3D1S nooca American hagaajinta 3D faseexad caadi ah badanaa waxay u isticmaashaa jikada wejiga jir & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US3D1S
3D biriishka hagaajin kara albaabka wejiga 1/2 ″
Hordhac:3D biriishka hagaajin kara albaabka waji 1/2 ”sida caadiga ah loo isticmaalo jikada jir & weelka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US3D12
1/2 ″ Haydarooliga jilicsan dhow 3D jikada hagaajin karo albaabka meegaarka albaabka
Hordhac:1/2 ″ Haydarooliga jilicsan ee u dhow 3D hagaajinta jikada albaabka albaabka albaabka albaabka badanaa loo isticmaalo jikada wajiga & armaajada musqusha Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US3D12S
1-1 / 2 door Albaabka Haydarooliga oo foojignaan u dhow jikada iyo jikada musqusha
Hordhac:1-1 / 2 door Albaabka Haydarooliga oo u dhow birta jikada jikada & armaajada musqusha badiyaa waxay u isticmaashaa jikada wajiga & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US3D112S
1-1 / 4 ″ Ku dhaji 105 Degree 2 Cam Press oo ku taal Face Frame Hinge
Hordhac:1-1 / 4 ″ Ku darso 105 Degree 2 Cam Press oo ku taal Face Frame Cabirka Hinge badanaa waxaa loo isticmaalaa jikada wajiga jikada & armaajooyinka musqusha. Haddii aad xiiseyneyso alaabadayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir.
Qaab No.: US3D114
Diirada saar horumarinta iyo soo saarida qalabka qalabka guryaha
Telefoonka: 021-66350149 / 66368006
Cinwaanka Shirkadda: Qolka 205, dhismaha B, 5589 Hutai Road, Degmada Baoshan, Shanghai, Shiinaha.
Cinwaanka Warshad: No.10 Yonghe Road, aagga Warshadaha Renhai, Leliu Town, Foshan City, Shiinaha.